Habka xogta ka Motorola wareejiyo Android -
Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga Motorola in Android
Hababka oo ku saabsan xogta ka Motorola gudbaayo Android
Mid ka mid ah habka, iyadoo la isticmaalayo oo aad ku wareejin kartaa dhammaan xogta aad ka phone Motorola in ay telefoonka Android waa in lagu xiro phone Motorola ay u PC ah, nuqul ka dhan ah xogta ay gacanta ka dibna u paste meel kombuutarka. Markaasuu u soo xiriiro, waxaad u baahan doontaa in la abuuro file .CSV ah oo dajiyaan in Microsoft Outlook. Markaas dhammaan xogta ku yeelan doonaa in la keeno si ay telefoonka Android ay mid mid. Waayo, kan waxaad u baahan tahay in ay ku xidhmaan telefoonka Android inay PC. Markaas, waxaa looga baahan doonaa in aad nuqul xogta laga meesha aad PC aad u dhejiyo oo wareejiso qalab Android aad.
Hab kale oo dhigaya in aad isticmaasho macluumaadka telefoonka Motorola ayaa si ay u abuuraan gurmad ah oo loo soo celin karaa telefoonka cusub Android kaga imaanayo this. Habkani waa adag tahay in la fuliyo, sababtoo ah inta badan dadka isticmaalaya casriga ah ma haystaan ​​noocaas ah khubaro farsamo oo sidaas daraaddeed, ma bilaabi kartaa abuurista hayaan on iyaga u gaar ah.
Waxaa jira wax badan oo dhan arrimaha hor joogsan habka wareejinta marka la isticmaalayo hababka kala iibsiga macluumaadka kor lagu soo sharxay.
1. Shakhsi nuqul / data dhajinta waa baaritaan dhab ah ka mid ah samirka iyo helo dhibsado ka dib markii in yar.
2. Messages ma noqon karo gacanta nuqul / dhejiyo ka mid qalab in kale. Midkoodna jadwalka mana wici kartaa abuse.
3. La'aanta farsamo aqoonta caqabad ku user guud ka abuurista hayaan sidii ay jirto wax badan in khalad kaas oo mararka qaar xitaa karnaa xogta aan waxtar lahayn karo.
Xalka fiican iyo fowdo si xor ah u dhibaato kala iibsiga xogta waxaa bixiya Wondershare MobileTrans. Wonderhsare Mobile Trans bixisaa si ay shuqulka laftiisa oo dhan u baahan oo kaliya ansixinta xogta ka user ku wareejiyo. In erayada fudud, Wondershare MobileTrans waa xal hal-click dhammaan xogta aad dhibaato wareejinta ah. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad wareejiyo wax walba oo ka mid ah aalad si kale oo ay ku jiraan Guda wac, fariimo iyo xitaa barnaamijyadooda! Wondershare MobileTrans Lagala soo bixi karaa http://www.wondershare.com/phone-transfer/ labada isticmaala Windows iyo MAC. Waxay bixisaa lacag la'aan ah maxkamad 30 maalin iyo sidoo kale waa la heli karaa version premium ah $19.95 oo kaliya. Wondershare MobileTrans Ay hubisaa in nabad iyo xasilooni wareejinta xogta aan fara gelin ku sameeyeen wax app xisbiga saddexaad dhibaato la xogta gaarka kuu ah.
Xal Easy: riix si aad xogta ka soo Motorola wareejiyo Android
Si aad u bilaabin isticmaalka Wondershare MobileTrans, waxa ugu horeeya ee ugu horreysa waxaad u baahan tahay inaad samayso waa inaad kala soo baxdo Mudanayaasha ka http://www.wondershare.com/phone-transfer/ oo ku xidh si aad u computer. Marka habka loo xirxiro la soo dhameeyay ka soo baxaa sida soo socota:
1. Run Wondershare MobieTrans aad laptop ama computer. Waxaad ka heli doonaa shaashadda xawaaladaha oo ku weydiin doonaa inaad xulo hab ah. Dooro "Phone in Transfer Phone".
2. Isku phone Motorola iyo telefoonka Android in aad laptop ama computer via fiilooyinka USB. Wondershare MobileTrans Iyaga lagu ogaan doonaa oo waxaan ku tusi suuqa kala ah sida soo socota.
3. menu ee xarunta muujinaysaa waxyaabaha xogta in lagu wareejiyo ka il (phone Motorola) si Ahaado (phone Android). Calaamadee dhamaan sanduuqyada haddii aad rabto in lagu wareejiyo dhammaan xogta laga isha si ay u socoto. Waxa kale oo aad uncheck kartaa qaar ka mid ah, si kastaba ha ahaatee, sida aad looga baahan yahay.
4. Riix "Start Copy" si ay u bilaabaan xogta habka wareejinta. Menu A muuqan doonaa, oo muujinaysa horumarka wareejinta xogta.
5. Waxaad arki doontaa muuqaalka kore ee "Guusha" ka dhanka ah wax kasta oo uu soo guuriyeen in qalab caga si buuxda halka kuwa aan la wareejin doonaa yeelan doonaa "sugitaanka" qoraal ah oo iyaga ka gees ah.
6. dib fadhiiso oo aad nasato. Xogta habka wareejinta qaadan doontaa waqti qaar ka mid ah ku xidhan xajmiga xogta in lagu wareejiyo. Dhanka kale aad wax kale samayn karto mar walba.
7. Kaliya u hubso in midkoodna labada qalabka uu ineysan inta lagu jiro hanaanka wareejinta xogta maadaama ay tani keeni kartaa in waxyeello ama xogta. Si kastaba ha ahaatee in aad, joojin kartaa habka waqti kasta adigoo riixaya "Cancel" button on xaq hoose ee shaashadda.
Waxaan ka kooban liiska qalabka Motorola ugu caansan oo lagu hadda laga isticmaalo Maraykanka. Codeeyaan mid aad u isticmaaleysaa hadda oo aan aragno oo qalab by Motorola ayaa user saldhigga ugu weyn:
LTE 4. Motorola Photon Q 4G
> Resource > Android > Sidee si ay u gudbiyaan Xogta laga Motorola in Android